Email: Soft Bounce နှင့် Hard Bounce Code ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ | Martech Zone
အီးမေးလ်တစ်စောင် ရုတ်တရက်ခုန်လွှား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏မေးလ်ဆာဗာမှအီးမေးလ်ကိုသီးခြားအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုအတွက်လက်ခံခြင်းမရှိသော်၎င်းသည်အီးမေးလ်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးကုဒ်ကိုပြန်ပို့သည့်အခါဖြစ်သည်။ အကန့်များကိုပျော့ပျောင်းသောသို့မဟုတ်မာကျောမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ soft bounces ပုံမှန်အားဖြင့်ယာယီသာဖြစ်ပြီးအခြေခံအားဖြင့်သူတို့အားဆက်ကြိုးစားရန်ဆန္ဒရှိသူများကိုပေးပို့ရန်ကုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Hard Bounces ပုံမှန်အားဖြင့်အမြဲတမ်းရှိနေပြီးလက်ခံသူထံမက်ဆေ့ခ်ျထပ်မံမပို့ရန်ကြိုးစားခြင်းမပြုရန်ပေးပို့သူအားပြောရန်စာဝှက်ထားသည်။
Soft Bounce ၏အဓိပ္ပါယ်
A နင် သည်လက်ခံသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ပတ်သက်သောပြtemporaryနာ၏ယာယီညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအီးမေးလ်လိပ်စာမှန်ကန်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ဆာဗာက၎င်းကိုငြင်းပယ်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောခုန်ပေါက်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာစာတိုက်ပုံးအပြည့်၊ ဆာဗာပြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျသည်အလွန်ကြီးလွန်းခြင်းဖြစ်သည် အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအများစုသည်စာမပေးပို့မီရက်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုအကြိမ်ကြိမ်ပေးပို့ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သူတို့ကအီးမေးလ်လိပ်စာကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပို့ခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်
Hard Bounce ၏အဓိပ္ပါယ်
A ခက်တယ် သည်လက်ခံသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ပြanနာ၏အမြဲတမ်းညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအီးမေးလ်လိပ်စာမှန်ကန်မှုမရှိခြင်းနှင့်ဆာဗာကအမြဲတမ်းငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံပျက်နေသောအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ခံသူ၏မေးလ်ဆာဗာတွင်မရှိတော့သောသို့မဟုတ်မရှိတော့သောအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကပုံမှန်အားဖြင့်ဤအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုထပ်မံပို့ရန်တားမြစ်လိမ့်မည်။ ခက်ခက်ခဲခဲကိုက်ညီသောအီးမေးလ်သို့ထပ်ခါတလဲလဲပို့ခြင်းသည်သင်၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနာမည်ပျက်စာရင်းထဲရောက်သွားနိုင်သည်။
4XX Soft Bounce နှင့် Hard Bounce Code ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ
ကုဒ် ပုံစံ ဖေါ်ပြချက်
421 soft ဝန်ဆောင်မှုမရနိုင်ပါ
450 soft စာတိုက်ပုံးမရပါ
451 soft အပြောင်းအလဲနဲ့အမှား
452 soft မလုံလောက်သောစနစ်သိုလှောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ချက်ပေးသူတစ် ဦး သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်သည် အီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်ပြန်ပို့ကုဒ်များနှင့်ဆက်စပ် RFC 5.XXX.XXX format နဲ့ codes တွေကိုဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပါတယ် အမြဲတမ်းကျရှုံးမှုများထို့ကြောင့်ခက်ခဲသောကုဒ်နံပါတ်များကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။ ပြနာကပြန်လာတဲ့ကုဒ်မဟုတ်ဘူး၊ မူလအီးမေးလ်လိပ်စာကိုဘယ်လိုဆက်ဆံသင့်သလဲ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကုဒ်များ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျနော်တို့အဖြစ်အချို့သော codes တွေကိုညွှန်ပြနေပါတယ် soft.
အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကသူတို့ကိုလက်ခံသူတွေကိုအီးမေးလ်အသစ်ပြန်ပို့ပေးလို့ရပြီးသူတို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာပါ။ အကြိမ်များစွာ (သို့မဟုတ်) စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအမျိုးမျိုးတွင်ပြန်လည်ကြိုးစားရန်သင်၏ပေးပို့မှု၌ logic ကိုသင်ထည့်ချင်ပေမည်။ ကုဒ်နံပါတ်ဆက်ရှိနေလျှင်သင်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည် မတတ်နိုင်.
5XX Soft Bounce နှင့် Hard Bounce Code ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ
500 ခိုင်မာသော လိပ်စာမရှိပါ
510 ခိုင်မာသော အခြားလိပ်စာအခြေအနေ
511 ခိုင်မာသော မကောင်းသော ဦး တည်ရာစာတိုက်ပုံးလိပ်စာ
512 ခိုင်မာသော မကောင်းသော ဦး တည်ချက်စနစ်လိပ်စာ
513 ခိုင်မာသော မကောင်းသော ဦး တည်ရာစာတိုက်ပုံးလိပ်စာ syntax
514 ခိုင်မာသော Destination mailbox address ကိုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါး
515 ခိုင်မာသော ဦး တည်ရာစာတိုက်ပုံးလိပ်စာမှန်ကန်သည်
516 ခိုင်မာသော စာတိုက်ပုံးပြောင်းသွားပြီ
517 ခိုင်မာသော မကောင်းသောပေးပို့သူ၏စာတိုက်ပုံးလိပ်စာကိုပုံစံပြထားခြင်း
518 ခိုင်မာသော ပေးပို့သူမကောင်းပါ
520 soft အခြားသို့မဟုတ် undefined စာတိုက်ပုံး status ကို
521 soft စာများကိုလက်ခံခြင်းမပြုဘဲစာတိုက်ပုံးကိုပိတ်ထားသည်
522 soft စာတိုက်ပုံးအပြည့်
523 ခိုင်မာသော မက်ဆေ့ခ်ျအရှည်အုပ်ချုပ်ရေးန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်
524 ခိုင်မာသော စာပို့စာရင်းတိုးချဲ့ပြproblemနာ
530 ခိုင်မာသော အခြားသို့မဟုတ် undefined မေးလ် system ကို
531 soft စာပို့စနစ်ပြည့်နေပြီ
532 ခိုင်မာသော ကွန်ယက်မက်ဆေ့ခ်ျများလက်ခံခြင်းမရှိသောစနစ်
533 ခိုင်မာသော ရွေးချယ်ထားသည့်အင်္ဂါရပ်များမတတ်နိုင်သောစနစ်
534 ခိုင်မာသော စနစ်အတွက်အလွန်ကြီးလွန်းသောသတင်းစကား
540 ခိုင်မာသော အခြားသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသော network သို့မဟုတ် routing status
541 ခိုင်မာသော အိမ်ရှင်ထံမှအဖြေမရှိပါ
542 ခိုင်မာသော မကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်မှု
543 ခိုင်မာသော ဆာဗာပျက်ကွက်မှုလမ်းကြောင်းပေးခြင်း
544 ခိုင်မာသော လမ်းကြောင်းမအောင်မြင်ပါ
545 soft ကွန်ရက်ပိတ်ဆို့ခြင်း
546 ခိုင်မာသော လမ်းကြောင်းကွင်းဆက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
547 ခိုင်မာသော ပေးပို့ချိန်ကုန်ဆုံးပါပြီ
550 ခိုင်မာသော အခြားသို့မဟုတ် undefined protocol ကို status ကို
551 ခိုင်မာသော မမှန်ကန်သော command
552 ခိုင်မာသော Syntax အမှား
553 soft လက်ခံလွန်းသူများစွာ
554 ခိုင်မာသော မမှန်ကန်သော command အငြင်းပွားမှုများ
555 ခိုင်မာသော မှားယွင်းသော protocol ဗားရှင်း
560 ခိုင်မာသော အခြားသို့မဟုတ် undefined မီဒီယာအမှား
561 ခိုင်မာသော မီဒီယာကိုမပံ့ပိုးပါ
562 ခိုင်မာသော ကူးပြောင်းလိုအပ်သောနှင့်တားမြစ်သည်
563 ခိုင်မာသော ကူးပြောင်းမှုလိုအပ်သော်လည်းပံ့ပိုးမရ
564 ခိုင်မာသော ဖျော်ဖြေဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူပြောင်းလဲခြင်း
565 ခိုင်မာသော ကူးပြောင်းခြင်းမအောင်မြင်ပါ
570 ခိုင်မာသော အခြားသို့မဟုတ် undefined လုံခြုံရေး status ကို
571 ခိုင်မာသော ပေးပို့ခွင့်ပြုချက်မရှိ, မက်ဆေ့ခ်ျကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်
572 ခိုင်မာသော စာပို့စာရင်းတိုးချဲ့ခြင်းကိုတားမြစ်သည်
573 ခိုင်မာသော လုံခြုံရေးပြောင်းလဲခြင်းလိုအပ်သော်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ
574 ခိုင်မာသော လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များမထောက်ပံ့ပါ
575 ခိုင်မာသော Cryptographic ကျရှုံးမှု
576 ခိုင်မာသော Cryptographic algorithm ကိုမထောက်ပံ့ပါ
577 ခိုင်မာသော မက်ဆေ့ခ်ျသမာဓိရှိခြင်း
911 ခိုင်မာသော bounce code မတွေ့ပါ။ hard bounce ၎င်းသည်မမှန်ကန်သောအီးမေးလ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သင်၏မေးလ်ဆာဗာမှငြင်းပယ်ထားသောအီးမေးလ်ဖြစ်နိုင်သည် (ဥပမာပေးပို့ခြင်းကန့်သတ်ချက်ကဲ့သို့)
အချို့ ISP များသည်၎င်းတို့၏ bounce codes တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းချက်များရှိသည်။ ကြည့်ပါ AOL, Comcast, ကော့, Outlook.com, Postini နှင့် Yahoo က!အပိုဆောင်း bounce code ကိုအဓိပ္ပာယ်အဘို့အ postmaster ဆိုဒ်များ။
Tags: 400 တုံကုဒ်များ421 ပျော့တုံ450 ပျော့တုံ451 ပျော့တုံ452 ပျော့တုံ500 တုံကုဒ်များ500 ခက်ခဲတုံ510 တုံကုဒ်511 တုံကုဒ်bounce ကုဒ်အဓိပ္ပာယ်bounce ကုဒ်ရှာဖွေရေးbounce codes တွေကိုအီးမေးလ် bounce ကုဒ်များခက်တယ်Hard bounce codes တွေကိုHard သို့မဟုတ်ပျော့တုန်RFC 3463နင်soft bounce codes တွေကို
ဒီဇင်ဘာ 5, 2016 မှာ 3: 56 AM
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကုဒ်များကို အခြေခံ၍ ပျော့ပျောင်းသောသို့မဟုတ်ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်စေသည့်အီးမေးလ် status ကိုမည်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်ကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပါသည်။ ဒီမှာ RFC 3463 မှာhttps://tools.ietf.org/html/rfc3463) က 4.XXX.XXX format ရှိကုဒ်များသည် Persistent Transient Failures များဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ soft bounce အမျိုးအစားအတွင်းကျရောက်ပြီး ၅.XXX.XXX format ရှိကုဒ်များသည်အမြဲတမ်းပျက်ကွက်မှုများဖြစ်သည်။
၅ ခုမှစတင်သော status codes အချို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ပျော့ပျောင်းသောအဆင့်များအဖြစ်သတ်မှတ်ရကြောင်းသင်ရှင်းပြနိုင်ပါသလား။
ဇန်နဝါရီ 14, 2017 မှာ 5: 25 AM
ငါထင်သည်သင်၏ညာဘက် Rajit, စာရေးသူအညီဆောင်းပါးရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ သတင်းမှားများထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အရာမရှိပါ။
14:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 53
အစိုင်အခဲအကွံဉာဏျ Rajith နှင့်ဒါဝိဒ်။ ငါဆောင်းပါးကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတ်စုတချို့ထပ်ထည့်မယ်။
1:2017 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 30
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၌မေးခွန်းတစ်ခုရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်များကိုစာပို့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည် syntax, DNS, Quota နှင့် invalid အကြောင်းဆွေးနွေးမှုများကိုထုတ်ပေးသည်။ Invaild i quess သည် mailadres သည်မှားယွင်းစွာရေးသားထားသောကြောင့် quota probaly သည်စာတိုက်ပုံးပြည့်နေပြီဟုရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါမှန်ပါသလား မရရှိလျှင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း wel ကဲ့သို့ wat ကဲ့သို့အခြားနှစ်ခုက syntax နှင့် DNS ဟုဆိုလိုပါသလား။ Gouwe ကိုနှုတ်ဆက်သည်